★မြန်မာ့အလင်း★: မုဒိမ်းကောင်တပည့်များ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခြင်း
မုဒိမ်းကောင်တပည့်များ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခြင်း
မွတ်ဆလင်တွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် မြို့ကြီးတွေမှာ ချီတက်ဆန္ဒပြတာကို ကြည့်ပြီး သူတို့ကို စည်းလုံးတယ်လို့ ထင်နေတယ် မဟုတ်လား? တကယ်တော့ မစည်းလုံးပါဘူး။ ဟန်ပြပဲရှိပါတယ်။ ဒီကောင်တွေ ဘယ်လောက် မစည်းလုံးလဲဆိုတာ အစ်စရေးကိစ္စကို ဥပမာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အစ်စရေးဟာ လူဦးရေ ၆ သန်းပဲ ရှိတယ်။ ဘေးပတ်လည်မှာ မွတ်ဆလင်တွေက သန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိပါတယ်။ အစ်စရေးက မွတ်ဆလင်တွေကို ပါးရိုက်ချင်တိုင်း ရိုက်နေတာ ကျနော်တို့ သိနေတာပဲ။ အစ်စရေးပါးရိုက်လို့ မွတ်ဆလင်တွေ မျက်ရည်ကျနေတာ တီဗီမှာ မြင်တယ်မဟုတ်ပါလား။ (သန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက ဂျူးနိုင်ငံသေးသေးလေးကို ဖင်တုံအောင် ကြောက်နေရတာလဲ ကုလားတွေ ရှက်ရမှန်းမသိဘူး။ ဟားဟား Allah ကိုးကွယ်သူတွေ အစွမ်းကတော့ ဂျူးနိုင်ငံသေးသေးလေးကို မော်တောင် မကြည့်ရဲတဲ့အဖြစ်ပါဗျာ။ အကောင်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတာ မွတ်ဆလင်ပဲဗျ။ ဂျူးသေးသေးလေးက အနိုင်ကျင့်လို့ ကုလသမဂ္ဂကို သွားတိုင်ရတာ အမောပါပဲ။)။
အဲလိုဂျူးသေးသေးလေး အနိုင်ကျင့်တာ ခံနေရတာဟာ သူတို့ မစည်းလုံးဘူးဆိုတာ မြင်သာတဲ့ အချက်ပါ။ စဉ်းလဲ ကောက်ကျစ်၊ ယုတ်မာနေတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မစည်းလုံးနိုင်ပါဘူး။ ဓါးပြတွေ၊ သူခိုး ဂျပိုးတွေ စည်းလုံးတာမြင်ဖူးလို့လား? အပေတေတွေရဲ့ ထုံးဆံအတိုင်း သူများတွေကို အနိုင်ကျင့်သလို သူတို့အချင်းချင်းလဲ သတ်ဖြတ် အနိုင်ကျင့်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့အချင်းချင်း ပိုပြီးတောင် မတရားလုပ်တယ်ဆိုတာ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ ပြသပါမယ်။
မွတ်ဆလင်တွေက အချင်းချင်းကို Brother ၊ Sister ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ် ချစ်ဟန်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဟန်ဆောင် ဖုံးကွယ်နေပါစေ . . .အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ အားလုံး ပေါ်လာတာပါပဲ။ မွတ်ဆလင်တွေ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေတာတွေကို သန်းပေါင်းများစွာသော မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်။ အဲလောက် ဗီဒီယိုတွေ အများကြီးထဲက အဓိကထား တင်ပြမှာက ပါလက်စတိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေပါ။ ဘာကြောင့်ပါလက်စတိုင်းကို ရွေးချယ်ရလဲဆိုရင် ဂျူးနဲ့ စစ်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ရန်သူရှိရင် လူဆိုတာ ပိုပြီးစည်းလုံးတတ်ပါတယ်။ အဲလို ရန်သူရှိနေတဲ့ ပါလက်စတိုင်းမှာတောင် အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့အဖြစ်ကို ကြည့်ရင် တခြား မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဆိုရင် ဘယ်လောက်အထိ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်မလဲဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဗီဒီယိုကတော့ မွတ်ဆလင်များက သူရဲကောင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Hamas အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလေး တစ်ခုပါ။ Hamas ဟာ Fatah အဖွဲ့ရဲ့ အသုဘ အခမ်းအနားကို ၀င်ရောက်ပြီး ပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူရမ်းကားအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်တာ ကြည့်လို့ကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ။ (ကျနော်တို့ရွာမှာဆိုရင် နွားအချင်းချင်းဝှေ့ရင် တကူးတက ပြေးကြည့်ရတယ်။ ပြေးကြည့်ရတော့ ပင်ပန်းတယ်။ အခုဟာ လူရမ်းကား တွေအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်တာကို ပေါက်ပေါက်ဆုတ်လေး စားရင်းထိုင်ကြည့်ရတာ ရွာက နွားဝှေ့ပွဲထက်ပိုပြီး အရသာရှိ၏) ပိုကြည့်ကောင်းတာက လူရမ်းကားတွေဟာ လက်နက်ကိုင်တွေ အချင်းချင်းပဲ ပြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူနေ အိမ်တွေကိုပါ သေသေခြာခြာ ပြစ်ခတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ computer game ကစားရင် မဆီမဆိုင်တဲ့ အိမ်တွေကို ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးသလိုပေါ့ဗျာ။ တနည်းအားဖြင့် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ကွန်ပျူတာမှာ မြင်နေရတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေလောက်ပဲရှိတယ်လို့ တွက်ဆလို့ရပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်းကြတော့ အရပ်သားတွေ ထိခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး မွတ်ဆလင်တွေ လမ်းတွေထွက်ပြီး ဆန္ဒမပြတော့ဘူးလား... ဟင်? အဲဒီပွဲမှာ နှစ်ကောင် သေပြီး၊ ၁၁ ကောင် ဒဏ်ရာ ရသွားပါတယ်။
ဒီဗီယိုကတော့ အာရပ် ခရစ်ယာန် တစ်ယောက် လုပ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ ပါလက်စတိုင်း Hamas အဖွဲ့တွေက မင်္ဂလာဆောင်မှာ သီချင်းဖွင့်တဲ့ အတွက် သတ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းကို ပြသထားပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး.. မွတ်ဆလင်တွေ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေတာ.. ဘယ်လောက် သနားဖို့ကောင်းလဲ။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ သူများနိုင်ငံမှာ နေတော့လဲ အဖျက်လုပ်ရပ်တွေပဲ လုပ်ပါတယ်။ လူလိုမနေကြပါဘူး။ သူတို့နိုင်ငံထဲမှာကြတော့လည်း အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်လိုက် မဒိမ်းကျင့်လိုက်နဲ့.ဗျာ. လူရမ်းကားဝါဒီတွေဟာ အင်မတန်ကို ရွံဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့ကို တခြားဘာသာတွေက Hamas လိုလုပ်ကြည့်ပါလား။ ခွေးတွေလို ၀ိုင်းဟောင်ကြမှာပါ။ သူတို့အချင်းချင်းသတ်တော့ ကန့်ကွက်တာ မြင်သလား? မြို့ကြီးတွေမှာ Hamas ကိုဆန့်ကျင်တာ ကြားမိပါသလား? သြောပြောဖို့ မေ့သွားတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းပုံကတော့ တကယ်ကို လေးစားထိုက်ပါတယ်။ “allah akbar” အော်ပြီး အချင်းချင်းသတ်တာနော်။ရိုးရိုးလေးမသတ်ပါဘူး။ ဟဲဟဲ.. မွတ်ဆလင်တွေကတော့ Allah ကို အဲလောက်အထိ ချစ်တာဗျ။ ဂုဏ်ယူပါ မွတ်ဆလင်တွေရယ်
တကယ်လို့သာ မြန်မာပြည်မှာ ပလီအတွင်း စစ်တပ်က ၀င်ပစ်တယ်ဆိုရင် ကုလားတွေ ဘာလုပ်မလဲ? မေးဖို့မလိုပါဘူး။ ခွေးတွေလို ဟောင်မယ်။ ခွေးတွေလို အူမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် ပလီထဲကို Fatah အဖွဲ့ကနေ ၀င်ရောက်ပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မွတ်ဆလင်မှ အဲဒါကို ဘာသာရေးစော်ကားတယ်လို့ မယူဆပါဘူး။ သူတို့အချင်းချင်းကြတော့ သတ်ချင်တိုင်း သတ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီမှာ အိမ်တွေကိုလဲ သူတို့ ဖျက်ဆီးပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်အဖွားကြီးတောင် အင်္ကျီချွတ်ခိုင်းတဲ့အထိ ပါပဲ။ ကဲကဲ.. မပြောတော့ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေ အချင်းချင်းသတ်တာကို ပေါက်ပေါက်ဆုတ်လေးစားရင်း ကြည့်ပါဗျာ
ကျနော်တို့က သူတို့ကို ဆိတ်တူ မျောက်တူလို့ပြောတော့ စိတ်ဆိုးကြပါတယ်။ အခုဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Hamas ကို ၀က်တွေ မျောက်တွေလို့ ပြောထားပါတယ်။ အဲဒါတော့ စိတ်မဆိုးဘူးဗျ။ ဗီဒီယိုထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေကလည်း သူတို့အသက်က တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာ သိနေတယ်။ ပြစ်ခတ်နေတဲ့အထဲမှာ ထိမှာခိုက်မှာကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ အေးလေ.. မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ခွေးသားဖေါက်သလို ထွက်နေတာ။ သူတို့သေသွားလဲ နောက်ထပ် ခွေးသားဖေါက်စက်တွေ ရှိသေးတယ် မဟုတ်ပါလား? မွတ်ဆလင်တို့ ထုံးဆံအတိုင်းပဲ လက်စားချေ တုံပြန်မှုကြောင့် ခွေးသေ ၀က်သေ နဲ့ ထပ်သေကြတာ ကြည့်ပါဦးဗျာ။ သြော် allah akbar အော်တာလည်း သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ် နော်။
အစ်စရေးက တကယ်ကိုဆိုးတယ်ဗျာ။ မွတ်ဆလင်တွေကို ပါးရိုက်ချင်လို့ကို တမင်ရိုက်နေတာဗျ။ အနိုင်ကျင့်ချင်လို့ကို အနိုင်ကျင့်နေတာ။ သူတို့ လေယာဉ်ပျံက ဗုံးတွေက Expire ဖြစ်တော့မှာ မိုလို့ ပါလက်စတိုင်းမှာ သွားပြီးဖေါက်ပြစ်နေတာ။ တကယ်တော့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းသတ်နေတာ အစ်စရေးက ဘာမှလုပ်ဖို့ မလိုဘူးဗျ ။ အခုလဲကြည့်ပါ မွတ်ဆလင်တွေ သတ်ဖြတ်နေတာ နည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒန်.. ဒန်.. ဒန်
အခုဗီဒီယိုမှာတော့ ဆိတ်တူ မျောက်တူ ကြီးပြောသွားတာ သဘောကျတယ်။ အချင်းချင်း မသတ်ရဘူးတဲ့ ။ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ မွတ်ဆလင်တွေက အချင်းချင်းဆိုရင် အစ်ကို၊ အစ်မ ဆိုပြီး နားဝင်ချိုအောင်ပြောကြပါတယ်။ အစ်ကို အစ်မတွေလို့ခေါ်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပါတယ်။ မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ အပြောချိုသလောက် အချင်းချင်း ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပါတယ်။
ဂျူးတွေကို ပါလက်စတိုင်းတွေက မုံန်းတယ်လို့ သိနေရပါတယ်။ ဗီဒီယိုတွေအရ တကယ်တမ်း နှိပ်စက်နေတာ ဂျူးထက် သူတို့မွတ်ဆလင်တွေ အချင်းချင်းနှိပ်စက်တာက ပိုပြီး ဆိုးရွားတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ အခုဗီဒီယိုမှာ ခြေထောက်တွေကို ပစ်ခတ်တာတွေကိုပဲ ကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားစရာတွေ ရှိလာပါမယ်။ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေ နေရာကနေ စဉ်းစားပါ။ မွတ်ဆလင်တွေကပဲ သူတို့ကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သတ်နေတာပဲ မဟုတ်ပါလား? ဂျူးတွေက သတ်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာမှ သတ်တဲ့ သဘောပဲရှိပါတယ်။ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ အိမ်တွေကို ဖျက်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်ကြောင့် ဂျူးတွေကို ဆန့်ကျင်နေရပေမယ့်။ သူတို့တကယ်မုံန်းတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင် လူရမ်းကားဝါဒီတွေပါ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာလဲ မွတ်ဆလင်ကိုယ်တိုင် ဂျူးတွေဟာ သူတို့ မွတ်ဆလင်ထက် ပိုမို သက်ညှာကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာလဲ မီဒီယာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေပါနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဲဒီအကြောင်းကို ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ မီဒီယာတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံကို အရှိအတိုင်းပြောပြရင် နအဖ လူလို့စွပ်စွဲခံရမယ့်အရေး ရှိနေပါတယ်။ မိမိဖာသာ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
လူရမ်းကားဝါဒီတွေဟာ ခွေးလို သားဖေါက်ထားတော့ တန်ဖိုး မရှိဘူးပေါ့။ အခုဗီဒီယိုမှာလဲ Yasser Arafat အမှတ်တရ အခမ်းအနားမှာလဲ သတ်ကြပြန်တယ်။ ခွေး ၇ ကောင်သေတယ်ဆိုပဲ။ ဟဲ . .ဟဲ..
ကုလားတွေကတော့ စောက်မြင်ကပ်ဖို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်းလဲ ကလိမ်ကကျစ်တွေပါ။ အီဂျစ်နယ်စပ်မှာ သွားပြီး ဆန္ဒပြတယ်။ ဆူဆူပူပူလုပ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ Hamas ကနေ လူတွေစုပြီး လုပ်ထားတာပါ။ ပြီးတော့ သူတို့ကပဲ သေနတ်နဲ့စပြစ်တယ်။အီဂျစ်ရဲတွေက ပြန်လည်ပြီး ပြစ်ခတ်တော့ ခွေးထီးတွေနဲ့ ခွေးမတွေ ထိခိုက်ကုန်တယ်။ ဒီတော့ မွတ်ဆလင်မတွေ အာပြဲကြီးနဲ့ ပြောနေတာ ကြည့်ပါဦး
ဒီဗီဒီယိုကတော့ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ပြစ်လို့ ၁၁ ယောက်သေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးပါ။ အဓိကပြချင်တာ အဲဒီသတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျူးတွေဟာ အစ်စရေးမှာ သူတို့ ကျူးကျော်သူတွေမဟုတ်ပဲ သူတို့ရဲ့ မူရင်းဌာနဆိုတာဖြစ်ကြောင်း လူတွေ သိအောင် ပြောတဲ့အပိုင်းလေးကို သိစေချင်လို့ပါ။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ငွေတွေနဲ့ ယုတ်မာတဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အစ်စရေးဟာ ပါလက်စတိုင်းကို ကျူးကျော်နေတယ်ဆိုတာ ထင်မြင်အောင် လုပ်ကြံထားတာပါ။ ဂျူးတွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ရင် လောဘကြီးတာ မှန်ပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေလို မရက်စက်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည်ပျောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ အခြေအနေအရ အဲလိုပဲ လောဘကြီးမှ ဖြစ်မှာပါ။သူတို့နေရာကနေ ကိုယ်ချင်းစာ ပါတယ်။ နားလည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက်က ဂျူးတွေနဲ့အတူတူ အမှန်ဘက်က ရပ်တည်တဲ့အနေနဲ့ အောက်ဖက် ဒီဗီဒီယို ကို တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယုတ်ညံ့လွန်းသည့် အဲဒီ လူရမ်းကားဝါဒကို ဘာသာအားလုံး စုပေါင်း အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေကို မေ့ထားမှ ဖြစ်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူတွေအချင်းချင်း ဘယ်သူမှ လူရမ်းကားဝါဒီတွေလို မသတ်ဖြတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ တခြားဘာသာဝင် အမျိုးသမီးလေးတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ အားမပေးပါဘူး။ မွတ်ဆလင် ခရစ်ယာန် အဓိကရုဏ်း၊ မွတ်ဆလင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိကရုဏ်း၊ မွတ်ဆလင် ဟိန္ဒူ အဓိကရုဏ်းတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိကရုဏ်းမရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟိန္ဒူအဓိကရုဏ်းမရှိပါဘူး။ လောကမှာ ဂြိုလ်မွှေနေတာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ၀ါဒ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဘာသာအားလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်ပါတယ်။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ၊ ဂျူး အားလုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူစိတ်ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကိုလည်း လက်တွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ၀ါဒကို ဆန့်ကျင်ပါ။ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တာနဲ့ ရန်သူလို့သတ်မှတ်ခိုင်းတဲ့ သင်ကြားချက်ကို ဆန့်ကျင်ပါ။ ယုတ်ညံ့တဲ့ ၀ါဒထဲမှာ တမိနစ်လေးတောင် မစောင့်ပဲ ထွက်ခွာကြပါ။ ခင်ဗျားတို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ဖြူဖြူစင်စင် ဆက်ဆံပါ။ အေးချမ်းမှု ခင်ဗျားတို့ ရင်ထဲကို ရောက်လာပါမယ်။
အားလုံး. . . အားလုံး.. အားလုံး.. မြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့ တံဆိပ်အောက်မှာပဲ စုစည်းကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးနှင့် ဗမာသည် မတူညီပါ။ ဗမာသည် မြန်မာလူမျိုးများထဲမှ တိုင်းရင်းသားတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ တခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေထက် ဘာမှ မထူးခြားပါ။
မုဒိမ်းကောင်ရဲ့ လူရမ်းဝါဒကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဘလော့သုံးခု ရှိနေပါပြီ။ နောက်ထပ် ဘလော့အသစ်တွေ လုပ်ပါဦးလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်း အရှိန် အဟုန် မြှင့်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ မိမိတို့ သူငယ်ချင်းတွေကို စည်းရုံးကြပါဦး။ ဆီပုံးတွေမှာလည်း စည်းရုံးကြပါဗျာ။ ကားစုတ်ကြီးကိုတွန်းပြီး ဆက်နှိုးရတာ တော်တော်ကိုမောတယ်။ ကဲကဲ.. နားပူအောင် ထပ်ပြောရဦးမယ်။ လူရမ်းကားဝါဒကို သယော်တဲ့ ကဗျာရေးပြီး ကော်မန့်မှာ ထားပေးပါ။ ကျနော်တို့ ဘလော့မှာ ကဗျာအရမ်းလိုနေပါတယ်။